Akụkọ Bible: Ihe Bible Kwuru Ga-emezu - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
Ọ bụghị naanị ihe ndị mere n’oge gara aga ka Bible kọrọ, kamakwa, ọ kọrọ ihe ndị ga-eme n’ọdịnihu. Ụmụ mmadụ apụghị ịkọ ihe ga-eme n’ọdịnihu. Ọ bụ ya mere anyị ji mara na Bible sitere n’aka Chineke. Gịnị ka Bible na-ekwu banyere ọdịnihu?
Ọ na-akọ banyere otu oké agha nke Chineke. N’agha a, Chineke ga-ekpochapụ ajọ omume na ndị ajọ mmadụ niile n’ụwa, ma ọ ga-echebe ndị na-efe ya. Jizọs Kraịst, bụ́ eze nke Chineke, ga-ahụ na ndị ohu Chineke nwetara udo na obi ụtọ, nakwa na ha agaghị arịa ọrịa ọzọ ma ọ bụ nwụọ anwụọ.
Anyị kwesịrị inwe obi ụtọ na Chineke ga-eweta paradaịs ọhụrụ n’ụwa, ọ̀ bụ na anyị ekwesịghị? Ma ọ dị ihe anyị ga-emerịrị ma ọ bụrụ na anyị ga-ebi na paradaịs ahụ. N’akụkọ ikpeazụ nke akwụkwọ a, anyị ga-amụta ihe anyị ga-emerịrị iji soro nweta ihe ọma niile nke Chineke kwadebeere ndị na-efe ya ofufe. Ya mere, gụọ NKEBI NKE 8 ka ị hụ ihe Bible na-ebu n’amụma banyere ọdịnihu.